Junior Win (ဂျူနီယာဝင်း) : July 2008
စာရေးဆရာမကြီး ဒေါ် ခင်မျိူးချစ်ရေးသားခဲ့သော
စာအုပ် ယခု ရတနာပုံစာပေမှ တတိယအကြိမ်ထွက်ရှိလို့လာပါပြီ။
ဆောင်းပါးပေါင်း ၃၁ ပုဒ်
အင်္ဂလိပ်စာလုံးများ အကြောင်း ၊စာဖတ်ခြင်းအကြောင်း၊
၀တ္တုတွေဖတ်ရတဲ့အရသာ၊သဘင် အနုပညာ စာပေ ဆောင်းပါးများအပြင်
ပီမိုးနှင်း ရာပြည့် အကြောင်းတို့ပါဖတ်ကြရမည်။
ပထမအကြိမ် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းစာပေ ၁၉၉၉ ခုနှစ်
ဒုတိယအကြိမ် ပဒေသာစာပေ ၂၀၀၁ ခုနှစ်
ယခု တတိယအကြိမ် ရတနာပုံစာပေ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဂျွန်လ
၄၆/၁ ဗိုလ်ရာညွန့်လမ်း ဒုဂုံမြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့
Posted by Junior Win at 12:37 AM No comments:
Wake up from Cyclone!
၂၂ - ၇ - ၂၀၀၈ မှ ၂၆ -၇ -၂၀၀၈ မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော
Wake Up From Cyclone မုန်တိုင်းမှနိုးထခြင်း
ကာတွန်းပြပွဲ ကာတွန်းရောင်းရငွေများကို လှူဒါန်းမည့်
အမှတ်တရနေ့တွေတုန်း က အမှတ်တရကာတွန်းတွေထဲက
၁၉၉၇ ခုနှစ်တုန်းက ကာတွန်း အော်ပီကျယ် ရဲ့ မဟေသီထဲက ကာတွန်းတဲ့။
Posted by Junior Win at 6:38 AM No comments:
Burma Cartoonists Donation - For Nargis Victims
ဒီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ လောကနတ် ခန်းမမှာ
၂၂ ရက်နေ့ဖွင့်ပွဲဖိတ်စာမှာ ၉ နာရီမှ ၁၂ နာရီဆိုတော့
ကာတွန်းချစ်ပရိသတ်များတော့နေ့လည် ၁၂ နာရီလောက်ကစပြီးဝင်ခွင့်ရမယ်ထင်ပါရဲ့။
၂၂ ရက်ကနေ ၂၆ ရက်နေ့ထိ မနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီလို့ဆိုတယ်။
Posted by Junior Win at 9:22 PM No comments:
BURMA DOCUMENTRY DVD – ThiTaGu Donation DVD
ဒီဗီဒီ အခွေ ထွက်ရှိလာပါပြီ။
အခွေထဲတွင် မေလ ၉ ရက်နေ့မှစတင်၍ဆောင်ရွက်ခဲ့သော
ဆရာတော်၏မေတ္တာစိတ် စေတနာစိတ် ကရုဏာစိတ် များကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ပြီး ၅ ရက်အကြာမှာရောက်ခဲ့သောဆရာတော်၏
နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ပြီး ၅ ရက်အကြာမှာတွေ့မြင်ရသည့်မြင်ကွင်းများ၊
Posted by Junior Win at 6:11 PM No comments:
Burma Martyrs Day
၆၁ နှစ်ပြည့် အာဇာနည်နေ့ ဒို့မမေ့
မြန်မာ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကျဆုံးခဲ့သည့် ၆၁ နှစ်ပြည့်
၇။မိုင်းပွန်စော်ဘွား စပ်စံထွန်း(၁၉၀၇မေလ၃၁ရက်- ၁၉၄၇ဇူလိုင်လ၁၉ရက်)
OUR FALLEN LEADERS
Saturday , 19 July 1947. The morning was wet. But Rangoon went on
its business as usual under the low-hung monsoon clouds.
The officials at the Secretariat were busy while people went in and out of
the office rooms.It was the start of another routine working day.
But things happened suddenly. At 10 37 am in the Chamber in which
the members of the Governor’s Executive Council were holding a
cabinet meeting under the chairmanship of Bogyoke Aung San, there
broke out an ugly , unearthly noise. The pungent smell of carbide and
fumes of heavy smoke rolled out of the Chamber when people rushed in
Inside, there was confusion. Chairs had been turned over , tables had been
upset and there was blood on the floor. Councillors were lying in different
positions, dead or dying. Bogyoke Aung San, Thakin Mya,Mahn Ba Khine, Deedoke
U Ba Choe, the Sawbwa of Mong Pawn, U Razak, U Ba Win. Councillors trusted
by the people, loyal to the people, had been cruelly cut down by the bullets
of dastardly assassins.
U Ohn Maung, Deputy Secrectary, Ministry of Transport and Communications,
who had entered the Chamber to submitareport, was also killed on the spot.
Ko Thet Htwe, the young bodyguard of Education Member U Razak, was shot
dead on the steps of the stairs when he attempted to stop the escape of the assassins.
This was the heavy price paid for our political unity and freedom.
(၁၉၈၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်အာဇာနည် နေ့တုန်းကဖြစ်ပါသည်။
ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း ဒေါ်ခင်ကြည်တို့၏နေအိမ်တွင် ၄၁ နှစ်ပြည့်
စာအုပ်လေးထဲမှာ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ စနေနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနှစ်
ထိုစာအုပ်လေးတွင်အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားထားသော OUR FALLEN LEADERS
စနေနေ့။ ၁၉ ရက်ဇူလိုင်လ ၁၉၄၇ ခုနှစ်။မနက်ခင်းကစိုစွတ်နေတယ်။သို့သော်ရန်ကုန်မြို့ကြီး
ပုံစံမျိူးစုံနဲ့လဲနေကြတယ်။ သေဆုံး၊သေလုဆဲဆဲ။ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း၊သခင်မြ၊
Posted by Junior Win at 9:07 PM No comments:
Burma Buddhist Pictures
A movie, called 'A monk's Single meal' was written and supervised by U Thu Ka,
famous writer and actor of Burma. It was directed by Maung Hnin Moe.
This film was also in English sub-titles by Dr.Khin Maung Win and Takatho Shwe Yi Win.
The movie was shown in Myanmar Television Programs (MRTV)several times especially
in Full Moon Days.
စာရေးဆရာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဆရာကြီးဦးသုခ
ရေးသားရိုက်ကူး၍ဒါရိုက်တာမောင်နှင်းမိုးရိုက်ကူးခဲ့သောဗီဒီယိုကား ၃ ကားကို
A Monk's Single Meal ဖြစ်ပါသည်။
This movie described the Buddhist concept of rebirth,past life and
future life.It also describe the fundamental Buddhist belief that present
is the consequence of he doings of the past lives and future will be determined
by the performance of the present. It is this belief which determines the actions of
the people in this movie. I think will help the viewer to understand their actions,even
if one may not agree with them.Here areafew points that will help the audience
to understand the message given by this movie.
This phrase has been used several times in the movie. It isastate of purity of
the mind,free from worldly desires, anger and ignorance. Whoever has attained
that state becomes free from the cycle of births and rebirths. Such freedom is
the ultimate goal of Buddhism.
Rejoicing in the Good Deeds of Others
Rejoicing in the Good Deeds of Others, saying "Thadu"(Well done) is
an important part of Buddhist practice. Such rejoicing, if done in right spirit,
gives one the benefits equivalent to those enjoyed by the doer.
BuyingaMonk's Single Meal at the Cost of 12 kyats
Among the characters is the man who spent his three years saving, namely 12 kyats,which
he intended to use to reclaim his daughter from slaverly in order to buyamonkasingle meal.
In ancient times, one kyat is equivalent to one gold piece.So, 12 kyats is equivalent to 12 gold pieces.
အသပြာ ၁၂ ကျပ်တန်သည့် ရဟန်းစားရသောဆွမ်းတစ်နပ်ကိုဝယ်ခြင်း
ဇာတ်ကားထဲကဇတ်ကောင်တစ်ဦးဖြစ်သသည့်သူဆင်းရဲသည် ၃ နှစ်တာစုဆောင်းရခဲ့သော
အသပြာ ၁၂ ကျပ်ကိုရဟန်းစားဖို့ဆွမ်းတစ်နပ် ဦးလောဘထံမှဝယ်ခဲ့ပါသည်။ရှေးတုန်းက
၁ ကျပ်သည်ရွှေစတစ်စနှင့်ညီိမျှသည်။ဒီတော့ငွေအသပြာ ၁၂ ကျပ်သည် ရွှေစ ၁၂ စ နှင့်
Posted by Junior Win at 2:41 AM No comments:
Books Review from Myanmar Journals
ဒီအပတ် NEWS WATCH ဂျာနယ်မှာမုံရွေးစာအုပ်တိုက်မှ
ထုတ်ဝေတဲ့စာအုပ်ကြော်ငြာမှာ ဂျူနီယာဝင်း ရဲ့ ကာမူးမိတ်ဆက်
Posted by Junior Win at 2:30 AM No comments:
Book Review from Myanmar Jourbnals
ထုတ်ဝေတဲ့စာအုပ်ကြော်ငြာမှာ တက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း ၏ ပုံပြင်စာအုပ်လေး
Posted by Junior Win at 2:29 AM No comments:
Nargis Cyclone Diary (1)
နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒိုင်ယာရီ (၁)
မေလ ၂ ရက်နေ့ည ၈ နာရီကျော်ကျော်လောက်ကကြေငြာထားသော ဂူးဂဲလ် မိုးလေ၀သကြေငြာချက်
" ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျက်ရှိသောဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းသည် နှေးကွေး စွာဖြင့် ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးနောက် မည်သည့်ဒေသသို့ ဦးတည်လျက်ရှိသည်ကိုပင် ကြိုတင်မပြောနိုင်သောလည်း ထိုအပူပိုင်းနာဂစ် ဆိုင်ကလုံးမုန်ုတိုင်း (Tropical Cyclone Nargis) သည် ရုတ်တရက်ဆုိသလိုပင် အင်အားပြင်းထန်သော ဘီလူးသူရဲ ဆိုင်ကလုံး (Monstrous Cyclone) အဆင့်၎ဆင့်ရှိ ၁နာရီ ၁၃၂ မိုင်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားနိုင်သည်ဟု "တိုင်ဖုန်းကြိုတင်သတိပေးဌာန"မှ ထုတ်ပြန်ထားသည်ဟု ဆိုပါသည်။
နောက်ဆုံးကြိုတင်ထုတ်ပြန်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သို့ နှေးကွေးစွာဝင်ရောက်နိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ သတင်းထုတ်ပြန်မူနှင့်ပတ်သက်၍ ထိုမပြည့်စုံသော မုန်ုတိုင်းသတိပေးမူများ များစွာ ရှိနေသောကြောင့် ထိုသတိပေးဌာန၏ သတင်းအချက်အလက်များအပေါ် တိကျသေချာသည်ဟု ပြောဖို့ခက်ပါသည်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များစွာမှ သိရသည်မှာ ထိုမုန်တိုင်းသည် ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံကို တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခြင်း မပြုတော့ဟူသော အချက်ကိုတော့ ထိုနိုင်ငံအတွက် စိတ်အေးရသည်ဟု ဆိုရမည်။
လွန်ခဲ့သော လအနည်းငယ်က ထိုအဆင့်လေး ဟာရီကိန်း မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ဘဂ်လားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံမှာ အလူးအလဲ ခံလိုက်ရပါသည်။ လူတွေထောင်ချီသေကာ လူပေါင်းသန်းပေါင်းများစွာကိုလည်း အစာရေစာ ဆန်စပါးပြတ်လပ် ပျက်စီးမှုဒဏ် ခံခဲ့ကြရသည်။
ဟောသည် နာဂစ်မုန်တိုင်းကြီး၏ နောက်ဆုံးကြိုတင်ဟောကိန်းအရ အဆင့် ၁ သို့မဟုတ် အဆင့် ၂ မုန်တိုင်းအဖြစ် ရှိနိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့သော် နောက်ဆုံးရရှိသော အချက်အလက်များအရ မုန်တိုင်းကြီးသည် ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပင် အရှိန်အင်အား ပို၍မြင့်တက်သွားသည်ကို တွေ့ကြရသည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော မြေပုံအရမေလ ၂ ရက်နေ့ည သန်းခေါင်ရံတွင် တနာရီ ၁၃၂ မိုင်နှူန်းဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ၀င်ရောက်ဖွယ်ရှိကာ ယင်းသည် တနာရီ ၁၆၁ မိုင်နှူန်းသို့ အင်အားတိုးသွားဖွယ် ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။"
မုန်တိုင်း ၏ သမိုင်းကြောင်း
စတင်ပျိူးခဲ့သည့် အချိန် ။ ။ ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့ ၂၀၀၈။
စတင်တိုက်ခိုင်ခဲ့သည့်နှူန်း ။ ။ မေလ ၃ ရက် ၂၀၀၈။
အမြင့်ဆုံးတိုက်ခတ်နှူန်း။ ။တစ်နာရီ ၂၁၅ ကီလိုမီတာ(တစ်နာရီ ၁၃၅ မိုင်)
ဆုံးရှူံးမှူအတိုင်းအတာ။ ။၁၃၃,၀၀၀ (သေဆုံး သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံး)
ပျက်ဆီးမူအတိုင်းအတာ။ ။$10 billion(USD)
ပျက်ဆီးသည့်ဧရိယာ ။ ။ဘင်္ဂလားဒေ့၊မြန်မာ၊အင်ဒီးယား၊သီရိလင်္ကာ။
လပွတ်တာတစ်ခုတည်းတွင်လူပေါင်း ၈ သောင်းသေဆုံးသည်။
ဘိုကလေးတွင် လူ ၁ သောင်းကျော်သေဆုံးသည်။
အနည်းဆုံး ၅၅,၉၁၇ ဦးပျောက်ဆုံးခဲ့ကာ ၇၇,၇၃၈ ဦးသေဆုံးသည်ဟု
လူပေါင်း ၂ သန်း သို့မဟုတ် ၃ သန်း အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟုပြည်ပကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့
သီရိလင်္ကာ မှ ဆူနာမီ ထက်ပို၍ဆိုးရွားသောမြန်မာပြည်၏သမိုင်းတွင်သည့်
အစိုးရမှ- ရန်ကုန် ဧရာဝတီ ပဲခူး မွန် ကရင် တနင်္သာရီ တိုင်း၅ ခုကို
disaster area နယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကာ နောက်ပိုင်းတွင်
ရန်ကုန် နှင့် တနင်္သာရီတို့အားဆက်လက်၍သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။
လပွတ်တာတွင် အဆောင်အဦ ၇၅ ရာခိုင်နှူန်းပျက်ဆီးခဲ့သည်။
ဧရာဝတီတိုင်းတခုလုံးအရ ၉၅ ရာခိုင်နူန်းပျက်ဆီးခဲ့သည်။
မဟုတ်၊ကြီးမှားသောရေလှိူင်းကြီးများကြောင့်ဖြစ်သည်”ဟု UN မှကိုယ်စားလှယ်
တင်ပြရင်း နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒိုင်ယာရီ (၁) ကိုရပ်နားလိုက်ရပါသည်။
Posted by Junior Win at 8:42 PM No comments:
Burma Poet and Writer - Burma Patriot - Maung Thaw Ka
Burma Poet and Writer - MaungThawKa
(၁၉၂၈- ? )
ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၉၂၈ ခုနှစ်တွင်ရွှေဘိုိတွင်မွေးဖွားသည်။ရွှေဘိုမြို့အမျိူးသားကျောင်း၊အစိုးရ
နှင့်ရဲဘော်၁၀ဦးတို့သည်အသက်ကယ်ဖောင်ဖြင့် ၁၃ ရက်ကြာမျှပင်လယ်ပြင်တွင်မျောနေရာမှ
ဂျပန်ကုန်တင်သင်္ဘောတစီးကတွေ့ရှိဆယ်ယူခဲ့၍အသက်မသေကျန်ရစ်သူ ၁၀ ဦးတွင်ပါဝင်သည်။
တပ်မတော်(ရေတပ်)တွင်ဗိုလ်မှူးအဆင့်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကာ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင်တပ်မှ
ပို့သခဲ့သောမေတ္တာများ … ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ
နှစ်သစ်ဦးချစ်ဦးလက်ဆောင်…၁၉၈၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ
ရှိတ်စပီးယား၏လက်ရွေးစင်ဆွန်းနက်ကဗျာများ …. ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ
နှစ်သုံးရာမှပဲ့တင်သံအသံလှိူင်းကဗျာများ …….၁၉၈၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ
နှင့် တိုက်ရေယာဉ်၁၀၃ အခန်းဆက်အဖြစ်မဂ္ဂဇင်းတွင်ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကာ
Posted by Junior Win at 9:04 PM No comments:
မြန်မာကာတွန်းဆရာများ ၁ တဲ့။
ကာတွန်းဆရာ ၁၄ ယောက်ရဲ့ ကာတွန်းသမားဘ၀တွေကိုရ
ထုတ်ဝေသူ ဦးသက်လှိုင် (၁၉၀၆)
”သူဌေးကြီးဦးကပ်စီးကိုအားကျလို့ “သူဌေးကြီးဦးဘိုင်တွန်“ ဇတ်ကောင်
လည်းရေးနိုင်ရင်ဒီလိုပဲလာပို့ကွာ“တဲ့။ကိုယ့်လုပ်အားနဲ့ စ ရတဲ့ငွေဆယ်တန်
တရွက် စ ကိုင်ဖူးတဲ့နေ့ပဲ။ဘာလုပ်ရမှန်းမသိအောင်ဝမ်းသာမိတော့ကောင်းမူ
စံရွှေမြင့်ကို ၁၉၆၅ မေလမျာလျိူ့ဝှက်သည်းဖိုမဂ္ဂဇင်းတွင်လေးမျက်နှာဖြင့်ပေါ်ပေါက်
“သည်းခံခြင်း” သို့မဟုတ် ”ဥပက္ခာပြုခြင်း” ပါပဲ။
တယ်။သတင်းစာ ၅ စောင်အတွက်နေ့စဉ်စိတ်ကူး ၅ ခုထုတ်ဆွဲရတယ်။
ကျွန်တော်ပုံရေးတဲ့အခါမြန်လာပါတယ်။Freehand ခဲ မရာပဲပုံကိုအပြီးရေးကျင့်
Posted by Junior Win at 8:43 PM No comments:
Burma Poet and Writer - Burma Patriot - Maung Thaw...
Book about web